Masinina gilasy fantsona - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
milina gilasy flake
evaporator gilasy flake
Masinina ranomandry flake an-dranomasina
milina gilasy fantsona
Mpanamboatra gilasy ara-barotra
Masinina gilasy slurry
Block milina gilasy
Lasitra gilasy baolina
Lasitra gilasy diamondra
Lasitra gilasy karandoha
milina famonosana gilasy
Vaovao momba ny milina gilasy
Ny ranomandry Tube dia karazana ranomandry cylindrical hollow miaraka amin'ny savaivony ivelany ø22,ø29,ø35mm ary halavany 25～42mm. Ny savaivony lavaka dia matetika ø0 ~ 5mm ary azo ahitsy araka ny fotoana fanaovana ranomandry.
Endri-javatra: matevina sy mangarahara ny ranomandry fantsona miaraka amin'ny fotoana fitehirizana maharitra. Tsy mety levona ao anatin'ny fotoana fohy. Ny ranomandry fantsona dia tena tsara tarehy, ary mety ho 100% mangarahara, kristaly. Toa tena mahafinaritra ny zava-pisotro, misotro.
Fampiharana: fihinanana isan'andro, zava-pisotro mangatsiaka, zava-pisotro, fitazonana legioma sy hazan-dranomasina vaovao, sns.
Fahafahana mamokatra ranomandry
Ny antsipiriany feno
milina gilasy 3T/andro
milina gilasy fantsona 5T/andro
milina gilasy 10/andro
milina gilasy fantsona 20T/andro
Ireto ny tombony lehibe indrindra amin'ny milina gilasy Tube.
Ny dika mitovy amin'ny tsara indrindra sy tsara kokoa noho ny tsara indrindra.
Tsy mitovy amin'ny orinasa mpamokatra gilasy hafa, ny rafitra Herbin Ice dia nandao ny teknolojian'ny gilasy nentim-paharazana Shinoa nanomboka tamin'ny taona 2009. Nandika ny teknolojia Vogt izahay nanomboka tamin'ny 2009.
Herbin ice Systems dia nividy milina Vogt efa nampiasaina modely P34AL, avy amin'ny orinasa gilasy sinoa iray tamin'ny 2009. Noravanay izany, ary nadikay daholo ny singa rehetra sy ny famolavolana rafitra. Ampiasainay ireo mpamatsy singa mitovy amin'ny Vogt, toy ny sensor sensor level Parker, valva fanerena tsy tapaka Parker sy ny sisa. Nakaninay ny famatsiana ranon-javatra marani-tsaina an'i Vogt, ampiana mpandray ranon-javatra eo ambonin'ny evaporator izahay mba hisorohana ny fikorontanan'ny rano ao anaty compressor, nampiana mpanakalo hafanana izahay mba hanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra. Nanao fanatsarana be dia be koa izahay nifototra tamin'io dika mitovy io mba hahatonga ny milina gilasy fantsona ho tonga lafatra araka izay tratra.
Milaza ny manam-pahaizana fa mbola tsara kokoa noho ny Vogt izao ny milina fandoroana gilasy ahy, satria milamina kokoa ny rafi-pitaterana solika, ary mora kokoa amin'ny mpampiasa ny famolavolanay.
Noho ny teknolojia avo lenta sy ny famolavolana rafitra marani-tsaina. Kely kokoa ny herinaratra lany amin'ny fanaovana gilasy mitovy amin'izany ny milina fanasan-dranomandry eto amintsika.
Ohatra, andeha isika hanao kajy amin'ny milina gilasy Tube 20T/andro.
Masinina herinaratra 100KWH amin'ny famokarana ranomandry 1 taonina ny milina Sinoa hafa mangatsiatsiaka rano.
Ny milina gilasy My Tube dia mandany herinaratra 75KWH fotsiny amin'ny fanaovana ranomandry 1 taonina.
(100-75) x 20 x 365 x 10 = 1825000 KWH. Raha misafidy ny milina gilasy 20T Tube ny mpanjifa dia hamonjy herinaratra 1825000KWH ao anatin'ny 10 taona izy. Ohatrinona ny herinaratra 1825000KWH ao amin'ny firenenao?
3. Tsara kalitao miaraka amin'ny fiantohana lava.
Ny 80% amin'ireo singa ao amin'ny milina gilasy Tube dia mitovy na mitovy amin'ny Vogt.
Ny singa sasany dia nafarana mivantana avy any Etazonia.
Ny ekipa mpanamboatra matihanina sy za-draharaha dia mampiasa tanteraka ny singa tsara.
Izany dia miantoka anao milina gilasy Tube tsara kalitao miaraka amin'ny fampisehoana miasa tsara indrindra.
Warranty ho an'ny rafitra vata fampangatsiahana dia 20 taona. Raha miova ny fiasan'ny rafitra vata fampangatsiahana ary lasa tsy ara-dalàna ao anatin'ny 20 taona, dia handoa izany izahay.
Tsy misy entona mivoaka ho an'ny fantsona ao anatin'ny 12 taona.
Tsy misy kojakoja fampangatsiahana simba ao anatin'ny 12 taona. Anisan'izany ny compressor / condenser / evaporator / fanitarana valves....
Garantie ho an'ny kojakoja mihetsika, toy ny motera / paompy / kojakoja elektrika, dia 2 taona.
5. Fotoana fandefasana haingana.
Ny orinasako dia iray amin'ireo lehibe indrindra ao Shina feno mpiasa za-draharaha.
Tsy mila mihoatra ny 20 andro isika hanaovana milina gilasy Tube kely kokoa noho ny 20T/andro.
Tsy mila mihoatra ny 30 andro hanaovana milina gilasy Tube eo anelanelan'ny 20T/andro ka hatramin'ny 40T/andro.
Mitovy ny fotoana famokarana ho an'ny milina iray sy milina maromaro.
Tsy hiandry ela ny mpanjifa mba hahazoana ny milina gilasy Tube aorian'ny fandoavana.
Ity ny lisitry ny mari-pamantarana amin'ny milina gilasy Tube mahazatra ho anao.
Ny milina gilasy fantsona dia azo amboarina, ary mety tsy mitovy ny parameter.